Ka 16, 2018 admin
New blockchain ETF malite na NYSE
A ọhụrụ blockchain exchange-ahịa enweta ego oru Wednesday na New York Stock Exchange.
The ETF (BKC) esetịpụ mbak nke 32 ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ cryptocurrencies ma ọ bụ ha na-apụtaghị ìhè blockchain technology. The ETF na-agba ọsọ site Rex Mbak na ifịk ifịk jisiri site Brian Kelly, a CNBC ntinye aka na isi nke BKCM, nke na-agba ọsọ a digital akụ atụmatụ maka ahịa.
The ego na-esetịpụ mbak Square na chipmaker Advanced Micro Devices.
French Finance Minister-ekwu na ọ bụ omiiko banyere cryptos
The French Finance Minister, Bruno Le Maire, aghọwo kasị agadi European ukara na hoo haa support kaadị ka o kwusara ohere nwere ya "ngụkọta ma kpebisie ike support."
Le Maire nso nso kwuru, dị ka a ike ike translation:
"M bụ ọhụrụ a afọ gara aga, ma ugbu a, m omiiko. O were m a afọ. Ka anyị na-akụziri anyị ụmụ amaala ibe ime France mbụ ebe maka blockchain na kaadị-akụ ọhụrụ na Europe. "
Coinigy malite na ndenye aha dabeere kaadị trading ngwa
Coinigy, a ígwé ojii dabeere cryptocurrency trading n'elu ikpo okwu, ka a mara ọkwa mwepụta nke Coinigy Mobile, a na ndenye aha dabeere na mobile cryptocurrency trading ngwa n'ihi na iOS na gam akporo, enye ndị ahịa na a n'elu ikpo okwu na ahia site na fọrọ nke nta 20 mgbanwe na data Njikọta gafee karịa 40 mgbanwe.
N'adịghị ka ihe fọrọ nke nta niile cryptocurrency trading nyiwe, na Coinigy Mobile trading ngwa na-arụ ọrụ a na ndenye aha nlereanya ebe ọrụ na-nyere ohere n'elu ikpo okwu na ya functionalities maka $21.95 kwa ọnwa.
Bitcoin Ngwuputa ngwá emeputa Canaan files for $ 1b IPO
Canaan Inc., ụwa nke abụọ kasị ukwuu onye nke bitcoin Ngwuputa ngwaike, osụk a depụtara ngwa ka Hong Kong ngwaahịa mgbanwe, nke a ga-ụwa nnukwu kaadị metụtara IPO.
Canaan Aims na-amalite trading ka anya dị ka July, a onye na ihe ọmụma nke okwu si, na-arịọ bụghị ka e kwuru na ọ bụ n'ihi na ndị ozi bụ onwe. Ụlọ ọrụ ahụ, dabere na Hangzhou, ere 300,000 bitcoin Ngwuputa rigs afọ gara aga na nwere revenue of 1.3 ijeri yuan ($205M). Kemgbe afọ, net ego surged karịa sixfold, dị ka Tuesday si ịgba akwụkwọ.
A ndepụta nke Canaan ga na-akpa na Hong Kong IPO si cryptocurrency ụlọ ọrụ.
Social ịkwụsị n'elu ikpo okwu eToro ẹkedori kaadị mgbanwe ke US
eToro, a na-elekọta mmadụ ịkwụsị n'elu ikpo okwu, launching a cryptocurrency mgbanwe na mobile wallet, na ịgbasa n'ime United States.
“Imu n'ụwa nile ga-enwe ohere na-enyere ha aka ịna-ekere òkè na cryptocurrency ahịa, n'agbanyeghị na ha nka,” CEO Yoni Assia kwuru na a pịa ntọhapụ.
Top cryptocurrency ahịa ga-enwe ike irite ego site na-eme ha portfolios uzo na eToro na-ekwe ndị ọzọ na-azụ ahịa na-idetuo ha trades.
The ikpo okwu nwere 10 nde ọrụ si 140 mba, si China na Russia na Switzerland na United Alaeze.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị usoro iheomume e nyere maka mgbe cryptocurrency nhọrọ ga-abụ dị na Amerịka, eToro ezube enye cryptocurrency trading ọ bụla ikike na mba.
Azerbaijan ụtụ isi revenue natara na cryptocurrency
Azerbaijan na-agwụ ike revenue natara na cryptocurrency, dị ka Nijat Imanov, osote onye ọga nke tax iwu na usoro nnyocha ngalaba maka Ụtụ Isi Ministry, dị ka mba Trend News Agency.
Ọ bụrụ na onye aka ekedep cryptocurrency na akanyam ya na a elu price, uru na-dere dị ka ego na n'okpuru ụtụ isi, Imanov kwuru, na-akpọ ya a uru tax maka ụlọ ọrụ iwu kwadoro na ihe ego tax maka ndị mmadụ n'otu n'otu.
Njehie nke Сrypto Investors. Error 1
Ekwela amụ Сrypt ...
Njehie nke kaadị Investors. Error 5
Itinye aka na oke tra ...
Ikwesị Ntụkwasị Obi nwere ike ẹkedori ...
bitcoinkaadịcryptocurrencymgbanweNgwuputaozin'elu ikpo okwutrading
Previous Post:Blockchain News 15.05.2018
Next Post:Blockchain News 17.05.2018
Gịnị Bụ Unboxed Network? Unboxed – a Massive Market Brands are spending
History of mbụ cryptocurrency
altcoins bitcoin ngọngọ yinye BTC ígwé ojii na Ngwuputa co atụle coin Coinbase kaadị cryptocurrencies cryptocurrency ethereum mgbanwe hardfork ico litecoin ma egwuputa Ngwuputa netwọk ọhụrụ ozi n'elu ikpo okwu protocol ripple soro telegram iriba-ama tokens trading wallet